Sida loo abuuro Samsung Account ee Samsung Apps & More
Sameyso Koontada Samsung si aad u hesho adeegyada badan ee Samsung
Sidoo kale koontada Google, shirkadaha badan ee akhristayaasha waxay ku dhiirigeliyaan inaad isticmaashid xisaabtooda isticmaalkooda, kuwaas oo inta badan ku daraan sifooyin dheeraad ah iyo adeegyo. Koontada Samsung waa hab sahlan oo lagu heli karo adeegyada kala duwan ee Samsung, oo ay ku jiraan Samsung Apps, Samsung Dive, iyo adeegyo kale duwan oo Samsung ah.
Marka aad ku biirto akoonka Samsung, waxaad ku raaxaysan kartaa dhammaan adeegyada Samsung adoon lahayn inaad abuurto ama saxiixdo xisaabaad dheeraad ah!
Noocyada Muhiimka ah ee Xisaabta
Dejinta xisaabta Samsung waxay awood u siineysaa dhowr fariimo oo ku saabsan taleefankaaga, iyo sidoo kale dhowr ah oo aad ku isticmaali karto telefanka, telefishinka oo dhan, kombiyuutarada iyo wixii ka sii badan.
Raadi My Mobile
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee xisaabtaada Samsung. Raadi My Mobile ayaa kuu ogolaaneysa inaad diiwaangaliso telefoonkaaga, ka dibna raadso haddii aan qalad aheyn. Marka aad raadinayso telefoonkaaga lumay, waad iska xiri kartaa adigoo garaacaya taleefanka (haddii aad u maleyneyso in lumay laakiin u dhow) iyo xitaa dhigay lambar telefoon oo kuugu yeedhaya mobile-kaaga lumay.
Haddii aad u malaynayso in taleefoonkaaga uusan kuugu soo noqonaynin, waxaad telefoon u diri kartaa telefoonka si aad uga saarto wax kasta oo xasaasi ah ama xog gaar ah. Taleefannadayadu aad ayay muhiim noogu tahay maalmahan, in mawduucan oo kaliya uu samaysto xisaab xisaabeed Samsung.
Sheekada Qoyska waxay kuu ogolaaneysaa inaad la wadaagto sawirada, xusuusta, iyo dhacdooyinka xubnaha kooxdaada. Kooxaha Sheekooyinka Qoyska waxay bixiyaan channel xiriir oo loogu talagalay koox yar oo ilaa 20 qof ah. La wadaag sawirrada daqiiqado iyo qiime qoys oo qaali ah si ay u xasuustaan ​​xubnaha kooxda.
Sawirada waxaa lagu kala saari karaa taariikhda, waxaadna ku raaxeysan kartaa sawirro si aad u xasuusto xusuustaada xusuusta leh. Waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso app Story App on qalab mobile ka hor inta aadan isticmaali karin.
Samsung Hub waa dukaanka madadaalada dijital ah ee Samsung, oo la mid ah Google Play , wuxuuna ku siinayaa inaad hesho muusikada, filimada, ciyaaraha, e-buugaagta iyo xitaa wax barashada. Waxaad u baahan doontaa inaad saxeexdo xisaabta Samsung si aad ugu dukaameysid dukaanka, laakiin markaad saxiixdo, booqashada iyo raadinta waxyaabo aad ku aragto waa mid deg deg ah oo fudud.
Waxaa jira xulasho wanaagsan oo laga heli karo hubka, qaar ka mid ah oo gaar u ah qalabka Samsung.
Abuuritaanka Koontada Samsung ee Kombiyuutarkaaga
Waxaad samayn kartaa koontada Samsung intii lagu guda jiro nidaamka dejinta ee telefoonkaaga, laakiin sidoo kale waxaad ku samayn kartaa internetka kombuyuutarkaaga.
Kombuyuutarkaaga, furo galka iyo u tag https://account.samsung.com. Boggan waxaa ku jira liisas badan oo ka mid ah sifooyinka aad ka faa'iideysan kartid marka aad saxiixdo koontadaada.
Guji ama ku dheji SIGN UP Now .
Akhriso shuruudaha & shuruudaha, shuruudaha adeegga, iyo Nidaamka Kumbuyuutarka ee Samsung ee bogga soo socda iyo ka dibna raadi ama guji AGREE . Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha iyo shuruudaha, ma socon kartid.
Buuxi foomka saxeexa adoo galaya cinwaankaaga email, xulashada erayga sirta ah iyo dhamaystirida macluumaadka macluumaadka profile.
Taabo ama guji NEXT .
Taasi waa! Hadda waxaad la soo saxiixan kartaa aqoonsiyada cusub ee la sameeyey.
Ku darista Koontadaada Samsung taleefankaaga
Haddii aad rabto inaad xisaabta ku darsatid akoonkaaga casriga ah ee Galaxy, waxaad si dhaqso leh uga fududaan kartaa qaybta " Account Add " ee goobaha muhiimka ah.
Waxaad furi kartaa app-kaaga munaasabadda telefoonkaaga oo aad ugu sii gudubto Qeybta Xisaabaadka . Halkan waxaad ku arki doontaa dhammaan akoonnada hadda jira firfircoon ee taleefankaaga ( Facebook , Google, Dropbox, iwm.).
Taabo xulashada Add Account .
Kadibna waxaa lagu tusi doonaa liistada dhammaan xisaabaadka xisaabta lagu dari karo telefoonkaaga. Xisaabaadka firfircooni waxay yeelan doonaan dhibco cagaaran oo ku xigta iyaga, xisaab aan firfircoonayn ayaa leh dhibic naxaas ah. Taabo xulashada koontada Samsung (waxaad ubaahantahay inaad ku xiran tahay Wi-Fi ama shabakada xogta si aad u sii wadato).
On screen shaashadda Samsung, la soco Create account cusub . Waxaad markaa u baahan doontaa inaad aqbasho shuruudaha iyo shuruudaha mid kasta oo ka mid ah adeegyadii adeega Samsung. Haddii aad diidid, ma sii socon doontid.
Faahfaahintaada ku qor foomka soo socda ee soo socda. Waxaad ubaahan doontaa inaad gasho cinwaanka emailka, lambarka sirta, taariikhda dhalashada iyo magaca.
Marka foomka la dhamaystiro, saxeexo liiska.
Sidee loo xoojiyaa Android iyada oo loo marayo Settings
Sida loo isticmaalo Amazon Alexa ee Android
Dhamaan ku saabsan Keyboard Keyboard for Android iyo macruufka
Star Wars: Farshaxanka La Xeeldheer - PS3
Sida Loo Helo Online Online Blog
Sida Loo Helo Xiriirrada Nimbuzz
7 Qaababka Wareega Muhiimka ah
Intel ugu wanaagsan Intel Pentium 4 Habboonayaasha
Maxay Isku Diiwantahay Xasiloonida? Waxaad mar hore ogaan kartaa Jawaabta
Sidee loo wada hadli karaa Bi-Wire iyo Bi-Amp Stereo Stereo
Sidee loo baran karaa sawirrada sawirada ee Zbrush ama Muddo
Dib-u-eegidda Maalinta Cirbixinta - Cayaarta Nitromku ma Joojinayso, Laakiin Miyaad Adaa?
IPod Tilmaamo loogu talagalay dadka indhaha la 'iyo indho la'aanta
Sidee loo yareeyaa heerka GIF-ga ee waxqabadka bogga internetka ee wanaagsan
Waa Maxay DWF Faylka?
VoIP telefoonada gacanta
Waa maxay sababta Minecraft's Hardcore Mode Is Great?
4 Kuwa ugu wanaagsan iPhone 6 / 6S Screen Protectors si ay u iibsadaan 2018
Meelaha ugu sarreeya si aad u soo iibisid qaababkaaga 3D
Sida Loo Beddelayo Jihada Guuleysiga Macmalkaaga
Sida Loo Shaaciyo Saxeexaaga Saxeexa ee Gmail kaaga